Voninkazo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Rose "Black Baccara": ny famaritana sy ny endriky ny fambolena
Araka ny fantatra dia mbola tsy misy rosia mainty eran'izao tontolo izao. Ny loko akaiky amin'ny bosoa dia manana ny mari-pahaizana "Black Baccara". Nalefan'ny mpamokarana frantsay iray tamin'ny 2004 izy. Araka ny fanoritsoritana, ny rose "Black Baccarat" dia tsy mitovy amin'ny karazana raozy hafa. Halalino amim-pahavitrihana ireo fahasamihafana ireo alohan'ny hametrahana io mponina io ao amin'ny zaridao.
Ny fomba hikarakarana ny tulips rehefa miposaka izy ireo, ny dingan'ny fitehirizana voninkazo iray
Angamba ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ny lohataona rehetra dia ny fotoana iveloman'ny tulips. Ireo zavamaniry tsara tarehy ireo no mampahafantatra antsika momba ny fahatongavan'ny lohataona. Ny hafaliana toy ny tulips, te-hampitombo isaky ny vanim-potoana aho, izany no mahatonga ny mpamboly voninkazo hamorona fomba iray hitahiry voninkazo mandra-pahatongan'ny lohataona manaraka amin'ny alàlan'ny fanangonana tulips aorian'ny fandalinana.
Maniry hazo mamy: mikarakara fambolena sy tsiambaratelo
Ny hazo lilia dia zavamaniry tsy mazava sady misitery. Ny mpikaroka sasany dia mankasitraka ny hatsarany, ny hafa dia milaza fa tsy toy izany ny zavamaniry toy izany. Na izany aza, ao amin'ny toeram-pivarotana fivarotana dia afaka mahita katsaka avy amin'ny hazo lilia ianao, ary rehefa mampiasa vola fotoana sy miasa, dia maniry voninkazo tsara tarehy. Na hazo? Aoka ho fantatsika ny hamaroan'ny fambolena azy.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao amin'ny fitomboan'ny platicodone
Platicodone (lakolosy Shell, antsoina hoe lakolosim-bolo lehibe) - solontena maharitra ny fianakaviana. Tian'ny mpamboly maro amin'ny alalan'ny fahasoavany ny voninkazo. Mba hitondrana vaovao sy vaovao amin'ny famolavolana ny tranokalany, maro ny mpamboly dia te hianatra ny fomba hikarakarana tsara ny voninkazo platicodon.
Ny tsiambaratelon'ny fampiroboroboana ny zana-ketsa amin'ny fikarakarana ny zozoro sy ny zaridaina
Tena malaza amin'ny zaridaina ny gnou. Io voninkazo mamirapiratra io dia malaza amin'ny voninkazo sy ny tsy fahampiana azy. Ny akorandriaka Tiorka dia manondro zavamaniry ornamana, izay midika fa mila fiahiana manokana izy. Mampitombo ny fofon'ny Tiorka avy amin'ny voa amin'ny alalan'ny zana-ketsa Carnation Tiorka dia avy amin'ny voa mampiasa fomba fitsaboana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Voninkazo